Vaovao - Ny tsenan'ny vovo-kalsioma klôroôida anhydrous dia nahatsapa fitomboana mahatalanjona teo amin'ny sehatry ny orinasa mpilalao lehibe
Ny tsenan'ny vovo-kalsiôma kôlôida anhydrous dia nahatsapa fitomboana mahavariana tao amin'ireo orinasan'ny mpilalao lehibe
Ny tsenan'ny vovo-kalsioma klôro anhidôro dia manaporofo ny fitomboana matanjaka. Ny Western Chemical Corporation dia mamita ny fahazoana Anadarko Petroleum Corporation $ 55 miliara
Ny calcium chloride dia matetika ampiasaina amin'ny fanamboarana plastika, fingotra ary fitaovana fanamainana hafanana hafa. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny additive na singa amin'ny famolavolana simika isan-karazany. Azo ampiana amin'ny antifreeze, diesel, lasantsy, menaka synthetic, loko, varnish, polyurethane, lubricants, sealants, pestisides ary vokatra maro hafa. Na dia tsy mitaky hafanana avo aza ireo vokatra ireo vao ampiana na esorina, mila tehirizina ao anaty tontolo tsy misy hamandoana sy hafanana tafahoatra izy ireo. Vao tsy ela akory izay, ny indostrian'ny lamba dia mitaky mafy ny vovo-tsiranoka klôroôida. Matetika izy io dia ampiasaina ho toy ny maso sizza ary amin'ny fanomanana ny vahaolana brine amin'ny fitaovana fampangatsiahana. Nandritra ny taona maro, na teo amin'ny toekarena mandroso na manangana, ny indostrian'ny lamba dia lasa iray amin'ireo indostria mampanantena indrindra amin'ny resaka lanja sy habe. Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Indian Brand Equity Foundation (IBEF), ny tsenan'ny lamba sy ny fitafiana indiana dia mitentina US $ 100 miliara tamin'ny taona 2019, izay mampiasa mpiasa 45 tapitrisa manerana ny firenena. Noho izany, ireo anton-javatra ireo dia afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny tsenan'ny vovo-kalsioma klôroôida anôdrous.
Makà kopia santionan'ity tatitra momba ny tsena ity @ https: //www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1788
Mikasika ny dian-jeografika, ny faritra Azia-Pasifika dia nitaky be dia be ny vovo -lorida klôro anhidraus nandritra ny taona maro. Izany dia satria ny indostrian'ny simika dia nitombo tsy an-kijanona. Ho fanampin'izany, Amerika Avaratra dia mandray vovo-tsiranoka klôroôida anhydrous. Ny fitomboana haingana amin'ny sehatry ny pharmaceutika dia afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny tsenan'ny vovoka chloride anhydrous faritra atsy ho atsy.
Vao tsy ela akory izay, tamin'ny Mey 2019, ny Western Chemical Corporation, mpamatsy vokatra kalsiôida klôrozida, dia nahazo Anadarko Petroleum tamin'ny $ 55 miliara dolara.
Ny vovo-kalsioma klôroôida dia iray amin'ny fiomanana kalsioma anhydrous izay ampiasaina matetika amin'ny indostria isan-karazany. Izy io dia hita amin'ny vovoka mahazatra maro, toy ny sira Epsom, magnesium sulfate, ary sira rock. Ity vovo-vovoka ity dia manana fampiasa betsaka ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany. Toy izany koa, ny indostrian'ny terminal hafa toa ny indostrian'ny simika, ny fanafody, ny loko, sns koa dia manana tahan'ny fandraisana an-tanana ny vovo-tsiranoka klôro kôlôida anhydrous. Amin'ny fanafody, io vovoka io dia ampiasaina matetika ho toy ny solon'ny electrolyte sy anti-allergie. Noho izany, ireo antony mahasoa ireo dia afaka manentana ny fitomboan'ny tsenan'ny vovo-kalsioma klôro aorida tsy ho ela atsy ho atsy.
Na dia be aza ny fangatahana vovo-kalsioma klôro klôro anhidrus dia mitaky fepetra manokana ny fitahirizany satria afaka mifoka hamandoana avy amin'ny rivotra izy ary mamadika azy ho ranoka masira. Noho izany dia ilaina ny kaontenera manokana hitazomana ny kalitaon'ny vokatra mandritra ny fitehirizana. Noho izany, ity fahoriana ity dia hametra ny fitomboan'ny tsenan'ny vovoka calcium chloride anhydrous.